चन्द्रमा पौडेल आइतवार, माघ ९, २०७३ 3030 पटक पढिएको
आज कथा भन्ने पालो गुरुआमाको हो । कक्षामा सबै विद्यार्थी कथा सुन्न आतुर थिए ।
गुरुआमाले भन्नुभयो, 'आज तिमीहरूलाई म सानो हुँदाको आफ्नै अनुभव बताउँछु । यो तिमीलाई कथा जस्तो लाग्न सक्छ किनभने समय धेरै बितिसकेको छ । पहिले र अहिलेमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।'
सबै विद्यार्थी झन् उत्सुक देखिए । धेरै वर्षअगाडिको कुरा सुन्न पाइने भो भनेर खुसी भए ।
गुरुआमाले यसरी कथा भन्न थाल्नुभयो । धेरै वर्षअघि म पनि तिमीहरू जस्तै सानी थिएँ । मेरो एउटा सानो भाइ थियो । स्कुल जाने बेलासम्म भाइ र म घरमा खेल्थ्यौं । बुवा-आमा खेतबारीमा काम गर्नु हुन्थ्यो ।
तिमीहरूले स्कुलमा टिफिन खाएजस्तो हामी खाँदैनथ्यौं । स्कुलबाट घर फर्किएपछि घरमा भएको खानेकुरा खान्थ्यौं । स्कुलमा दिनभर भोकै हुन्थ्यौं । हामी लखतरान भएर घर फर्कन्थ्यौं ।
हामी घरमा सधैं एउटै खाजा खान्थ्यौं । त्यो के भने बिहान पकाएर राखेको भात र मही । हामीलाई यस्तै खाजा खाने बानी परेको थियो ।
भोक लागेको बेला म भात र मही मीठो मानेर खान्थेँ, तर भाइ खाँदैनथ्यो । म उसलाई माया गरेर फकाउँदै खाजा खाउ भन्थेँ । ऊ धेरै दुब्लो र कमजोर पनि थियो । पढाइमा पनि कमजोर थियो । सरसफाइमा पनि ध्यान दिँदैनथ्यो ।
दुब्लो भाइलाई देखेर बुवा-आमा धेरै चिन्तित भएका थिए । वरपरका मानिस तिम्रो भाइलाई जुका परेको होला भन्थे । बुवाआमाले भाइलाई घरेलु औषधि खुवाउनुभयो, तर उसलाई ठीक भएन ।
पहिला गाउँघरमा स्वास्थ्यचौकी थिएन । सबै बिरामीलाई घरेलु औषधि खुवाउँथे । अस्पताल धेरै टाढा हुन्थ्यो । यातायातको सुविधा पनि थिएन ।
कोहीकोही धेरै बिरामी भए भने डोकामा बोकेर अस्पताल लैजान्थे । कतिपय बिरामी अस्पताल पुर्‍याउन नपाई परलोक जान्थे ।
मेरो भाइलाई पनि बुवाआमाले धेरै घरेलु औषधि गर्नुभयो । जुका परेको भनेर खाली पेटमा खरानी पानी खुवाउनुभयो । सिरु घाँसका जरा कुटेर खुवाउनुभयो । नास परेको हो कि भनेर नासको तीतो औषधि खुवाउनुभयो । जति उपाय गर्दा पनि ठीक नभएपछि बुबा ज्योतिषीकहाँ गएर चिना हेराउनुभयो ।
ज्योतिषीले बुवालाई घरमा पूजा लगाउन सल्लाह दिनुभएछ । एक दिन बुवाले पूजा लगाउनुभयो । भाइलाई पनि सँगै राख्नुभयो । मैले बुवालाई म भाइसँगै बसेर पूजा गर्छु भनेँ, तर पाइनँ । भाइको ग्रहदशा बिग्रेकाले भाइले मात्र पूजा गर्छ, तिमी नगर भन्नुभयो । पूजा गर्न नपाएकाले मलाई नरमाइलो लाग्यो ।
आमाले भनेअनुसार भाइ र मैले पूजा सकिएपछि साँझमा धेरै प्रकारका फलफूल, सेलरोटी, चामल आदि हालेको ठूलो टपरी दोबाटोमा सेलाएर आयौं, तर पनि भाइलाई सञ्चो भएन ।
बुवाले अर्को दिन घरमा धामी बोलाएर झारफुक गर्न लगाउनुभयो । धामीले भने जसरी कालो बोको र रातो भालेको बलिपूजा गरिदिए, तर पनि भाइलाई सञ्चो भएन ।
बुवाले मार्ई नदीमा परेवाको बच्चा बलि दिन भाकल गर्नुभयो । बुवाले परेवाका बच्चा खोजेर ल्याउनुभयो । भाइ र मैले परेवाको बच्चा हेर्‍र्यौं । परेवाका बच्चा आँखामात्र पिलपिल गरिरहेका थिए । जाडोले कामिरहेका थिए । त्यो देखेर हामीलाई असाध्यै माया लाग्यो । यस्तो बच्चालाई बलि दिने भनेपछि हामी झन् दुःखी भयौं ।
भाइ र मैले परेवाका बच्चाहरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर सल्लाह गर्‍यौं । तिनीहरू पेरुंगोभित्र भट्याक-भट्याक गरिरहेका थिए ।
भोलिपल्ट बिहानै बुवाआमासँगै भाइ र म पनि माईखोलामा नुहाउन गयौं । म पछिपछि हिँडिरहेकी थिएँ ।
नुहाइसकेपछि बुवाआमा पूजा गर्न थाल्नुभयो । हामी तिनै बचेराको छेउमा थियौं । बुवाआमाले पूजा गर्न माईतिर फर्केका बेलामा हामीले पेरुंगोको मुख उघारेर बच्चा उडाइदियौं । हामी खुसीले चिच्यायौं । बुवाआमा 'ल ! अब बर्बाद भयो' भनेर दुःखमनाउ गरिरहनुभएको थियो । हामीले आजै अस्पताल गएर उपचार गर्ने भनेर जिद्दी गरिरह्यौं ।
बुवाआमाले माई भगवतीसँग माफ माग्नुभयो । माईबाट फर्कंदा बाटैमा पर्ने अस्पतालमा भाइलाई जँचायौं । डाक्टर अंकलले भाइलाई पौष्टिक तत्त्वको कमी भएको भन्नुभयो । औषधि पनि दिनुभयो ।
बुवाआमाले भाइलाई डाक्टरले दिएको औषधि नियमित खुवाउनुभयो । केही दिनमै भाइलाई पनि सञ्चो भयो । रोग निको भएपछि भाइ खुसी भयो । बुवाआमा पनि खुसी हुनुभयो । म पनि खुसी भएँ ।
मेरो भाइ ठूलो भइसक्यो । धेरै मेहनत गरेर पढेकाले डाक्टर भयो । ऊ गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा डाक्टर भएको छ । गाउँगाउँमा पुगेर बिरामीलाई अस्पताल लगेर उपचार गरौं, धामीझाँक्रीको विश्वास नगरौं ।
'तिमीहरूलाई मेरो कथा कस्तो लाग्यो ? ', गुरुआमाले सोध्नुभयो ।
सबैजना खुसीले फुरुंग भए । सबैले कथा मन पराए ।
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 1104
'पूर्वराजाको अभिव्यक्ति निरर्थक' 2099
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 5524
बेचिंदै गएका खोला 272
युवती विवादमा गोली चलाउने पक्राउ 1534
काठमाडौंको ठमेल अब 'सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र' 666
तीन लाख नगदसहित ३० जुवाडे पक्राउ 1233
कल्याण गुरुङलाई गोली हान्ने चारजना पक्राउ 6675